Ririnina any Sri Lanka ~ Journey-Assist - Firy. Aiza. Inona no tadiavina?
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Ririnina any Sri Lanka
Sri Lanka dia firenena azo antsoina hoe optimal ho an'ny ririnina. Ny vanim-potoana fizahan-tany lavitra, izay mameno ny fotoana manomboka ny volana novambra ka aprily, dia manintona ny andro tsy misy rahona, tora-pasika lehibe misy fasika mavo sy ny fitonian'ny ranomasina mafana. Mandritra io vanim-potoana io, ny mpitsidika avy amin'ny firenena rehetra dia tonga any amin'ny nosy.
Visa visa ao Sri Lanka
Ao amin'ny faritr'i Sri Lanka ririnina
Accommodation. Hotels. raitra
Toetr'andro any Sri Lanka amin'ny ririnina
Mitety $ 40 dolara ny visa mpizahatany iray any Sri Lanka. Navoaka rehefa tonga. Raha te hahazo dia tsy maintsy manolotra tapakila fiverenana ianao (izay mety takiana amin'ny fialana). Azo atao ny mangataka visa amin'ny alàlan'ny rohy https://eta.gov.lk (tsy maintsy atolotra ny vidin-tapakila amin'ity raharaha ity) amin'ny vidiny $ 35. Tonga avy hatrany ny valiny fa indraindray kosa mila miandry hatramin'ny 3 andro ianao. Raha sendra ny fotoana ahatongavana mandritra ny 30 andro dia azo aitatra any amin'ny ivon'ny fifindra-monina ao Colombo ny visa. Mandritra ny 60 andro dia mitentina $ 25 ho an'ny olom-pirenena ao amin'ny Federasiona Rosiana ary $ 50 ho an'ny olom-pirenena any Ukraine.
Ny sidina iray eo ho eo dia mitentina 450 $-fitsangatsanganana miaraka amina fiaramanidina lafo vidy ho an'ny olona iray. Ny vidin'ny tapakila avy any Moskoa sy Kiev dia saika mitovy, raha toa ka afaka mahita tahiry ianao indraindray miaraka amin'ny 1 dolara. Azonao atao ny mifankafantatra amin'ny safidy rehetra amin'ny sidina amin'ny aviasales.ru na momondo.
Aiza ao amin'ny faritr'i Sri Lanka no tsara kokoa amin'ny ririnina?
Ho an'ny ririnina amin'ity firenena ity, trano fandraisam-bahiny 3 mety tsara. Ireo dia Mirissa, Hikkaduwa sy Unawatuna. Izy ireo dia tsara indrindra ho an'ny fianakaviana manontolo, ary ho an'ny olona tokana. Ireo dia ireo trano fandraisam-bahiny ireo no manana fotodrafitrasa tsara indrindra ho an'ny mpizahatany any Sri Lanka (misy fivarotana maro, fivarotana, banky, mpivarotra, trano fisakafoanana, teboka bisikileta ary fiara, ary fisafidianana trano fanofa trano).
Na avy amin'ireo fitsangatsanganana ireo aza dia mora mankany amin'ny tanàn-dehibe lehibe indrindra amin'ny firenena miaraka amin'ny toeram-pitsaboana sy trano fivarotana lehibe. Ho an'ny tsirairay, avy amin'ny Unawatuna sy Hikkaduwa, dia afaka mora foana haingana ary mankany Galle, ary manomboka any Mirissa ka Mataru.
Any amin'ireo toerana mpizahatany indrindra any Sri Lanka, dia maro ny mponina ao an-toerana no miteny anglisy tsara, ary ny sasany aza Rosiana.
Olana momba ny trano
Ny fametrahana hotely iray mandritra ny fijanonana iray manontolo dia safidy tsy mendrika. Rehefa dinihina tokoa, dia azo inoana ianao dia mitety ny firenena, mandany andro amin'ny hotely samihafa. Ao amin'ny Internet koa tsy misy lisitra feno momba ny tolotra misy. Sri Lankans matetika dia manofa trano tsy lafo nefa tsy mampiasa Internet ho an'izany.
Tsara kokoa ny mametraka efitrano fandraisam-bahiny amin'ny hotely tsy mihoatra ny 2 herinandro. Ity indray mandeha ity dia ampy hahitana sy manofa trano mora kokoa sy malefaka kokoa.
Trano iray mitokana iray manontolo ho an'ny olona 4-6 ao Sri Lanka dia azo hofanina amin'ny $ 600-900 $ isam-bolana. Amin`ny maha-fitsipika azy, ny trano toy izany dia tsy misy fantsom-panala rivotra ary misy efitrano 2 na 3 (izay mety manana fandroana 1-3), lakozia sy tokotany kely. Efitrano fandraisam-bahiny 2 na 3 dia mety hitovy ny vola mitovy aminy. Ho an'ny vondron'olona midadasika indrindra. Trano lehibe (matetika-tantara) ho an'ny olona 2-6 izany ary lafo amin'ny 8 dolara isam-bolana.
Ho an'olon-tokana na mpivady, na ny efitrano 1 amin'ny trano fandraisam-bahiny iray aza dia mety (raha mila safidy ara-tetibola). Mahatratra 300 dolara eo ny vidiny.
Mitentina 5-8 isan’andro ny sakafo any amin’ny trano fisotro tsy lafo mora vidy ho an’ny olona 1. Fa any amin'ny trano fisakafoanana tsara izay manolotra lovia eoropeana dia mivadika in-3 lafo vidy kokoa izy. Raha mahandro tena ny tenanao, avy eo ho an'ny olona mahazo ny 1-4 dolara isan'andro.
Ny tobim-pitsaboana tsy miankina ao Sri Lanka dia manome serivisy serivisy mahazatra. Madio foana izy ireo, milahatra amin'ny isa maro, miteny ny teny anglisy ny dokotera, ao amin'ny efitranon'ny hopitaly dia misy fantsom-pifandraisana azo ampiasaina. Ny fandinihana voalohany amin'ny dokotera dia mitentina $ 15 eo ho eo. Ny fanendrena mialoha dia atao amin'ny telefaona. Fa tsy tokony ho tsaroana fa ny Sri Lankans (anisan'izany ny dokotera) dia tena sola matotra ary tsy be pitsiny indrindra. Noho izany, na dia ao amin'ny toeram-pitsaboana tsy miankina iray aza dia mety ho adiny iray tara ny dokotera. Any Galle, ny klinikà tsy miankina tsara indrindra dia Ruhunu sy Hemas. Samy manana ny tranokalan'izy ireo manokana.
Mazava ho azy, misy ny klinika monisipaly any Sri Lanka. Ny serivisy tena mora vidy na dia an'ny vahiny aza, maro ny serivisy maimaim-poana amin'ny ankapobeny, fa ambany ny haavon'ny serivisy - na ambany noho ny toeram-pitsaboana monisipalin'ny firenena USSR teo aloha. Vitsy ny miteny anglisy any, any amin'ny klinika ny tenany dia maloto, maro ny olona, ​​ny filaharana indraindray maharitra andro maromaro (tsy fanitarana io).
Vinavinaina ny fiantohana ao amin'ny firenenao. Raha ilaina dia afaka miantso ny fiantohana orinasa ianao, izay hifandray amin'ny toeram-pitsaboana tsy miankina amin'ny tanàna akaiky anao ary hanomana fotoana miaraka amin'ny dokotera.
Any Sri Lanka, tena tsara ny toetrandro. Ny antonony dia eo ho eo ny +30. Ambony ihany anefa ny fahalemem-panahy, saingy tsy vazivazy sy mahafinaritra. Rehefa andro vitsivitsy dia matetika ny teratany vahiny no manaraka ny toetrandro tahaka izany. Ny orana eto matetika no fohy. Matetika ny orana dia amin'ny alina ary tsy manakana ny fitsaharana sy ny fitsangatsanganana manerana ny firenena.
Roa isan-taona (faran'ny volana Mey sy faran'ny Oktobra) misy fe-potoana 2 herinandro, rehefa be ny orana ary mivezivezy mandritra ny andro iray. Izay ilay antsoina hoe. orana orana. Fa mandritra ny ambiny, vetivety ihany ny orana ary tsy dia mikorontana izany.
Ny fiarovana rehefa miatrika ny an-toerana
Tokony ho vonona ny hisarika ny saina manelingelina ny lehilahy Sri Lankan. Ary misy koa olona voakasik'izany. Rehefa dinihina tokoa, dia miramirindra fotsiny ny mponina eto an-toerana ary tena manelingelina. Tian'izy ireo foana ny hahalala ny rehetra (indrindra ny vahiny fotsy) ary hiresaka fiainana, ary tsy izany ihany.
Any Sri Lanka, maro be no antsoina hoe. bichboi. Ireo dia gigolos amoron-dranomasina izay tia mifankafantatra sy mahafatifaty vehivavy amin'ny vanim-potoana rehetra (avy amin'ny vehivavy vahiny fotsy), manao voady ny fitiavana mandrakizay hahazoana miditra amin'ny kitapom-bolan'ny vehivavy. Ny ankamaroan'ireny koba ireny dia manambady na avy amina olon-dehibe maro manankarena, ka naharesy lahatra azy tsirairay fa izy irery no izy.
Ny haavon'ny vono olona any Sri Lanka dia ambany sy ambany, ohatra, ho an'ny Rosiana in-3 eo ho eo. Ny hariva, ny làlana lehibe amin'ny tanànan'ny tanàna dia tena azo antoka. Any Hikkaduwa, misy ny departemantan'ny polisy mpizahatany manokana. Ary amin'ny ankapobeny, ny Sri Lankans dia olona, ​​na dia manelingelina, fa amin'ny ankapobeny tsara, tsy masiaka. Na izany aza, tsy tokony hamela zavatra sy vola tsy voarindra.